လူဖြူ - ဝီကီပီးဒီးယား
လူဖြူများကို လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနှင့် အရေပြားအရောင်သတ်မှတ်ခြင်းကို အဓိကထား၍ ဥရောပနှင့် ဥရောပမှ ကျယ်ပြန့်သော အနောက်တိုင်းယူရို လူမျိုးနွယ်ဖွားများအတွက်သာ အသုံးပြုကြသည်။  အခြေအနေ၊ နိုင်ငံသားနှင့်ရှုထောင့်ပေါ်မူတည်သည်။ ထိုအခေါ်အဝေါ်ကို တောင်အာရှ ၊   အရှေ့အလယ်ပိုင်း နှင့် မြောက်အာဖရိက မှဆင်းသက်လာသူများ (ဥပမာ အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆိုချက်) တွင်ပါ ဝင်သူများ၊ အမေရိကန်။ ဒါဟာအယူအဆအငြင်းပွားမှုများခဲ့ပေမယ့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, တောင်ပိုင်းဥရောပသားများနှင့်အိုငျးရဈနွယ်ဖွားပင်ဤအမျိုးအစားမှဖယ်ထုတ်လိုက်ကြပြီ, အငြင်းပွားဖွယ်စွပ်စွဲခဲ့သည်   အဓိကအားဖြင့် (သို့) သီးသန့်ဥရောပလူ ဦး ရေအတွက် "လူဖြူ" သို့မဟုတ် "လူဖြူပြိုင်ပွဲ" ကိုသူတို့၏ အသားအရေအလင်း အားဖြင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအရအသုံးပြုခြင်း၊ " လူမည်း "၊ အမေရိကန် ၊ ဘရူလူမျိုး နှင့်အခြားသော ၁၇ ရာစုမှ အစပြု၍ အရောင်အသွေးစုံလင်သော လူသို့မဟုတ် အရောင်အသွေးစုံလင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည် ။ ၁၉ ရာစုအတွင်း၌သာဤမရေရာသောအမျိုးအစားကို လူမျိုးရေး နှင့် အရေပြားအရောင်စပ် မှု ဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းကျသည့်သိပ္ပံပညာ ဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
"ဥရောပအခြေချနေထိုင်မှုဒေသများ" (အပြည့်အဝသို့မဟုတ်အများအားဖြင့် ဥရောပနွယ်ဖွားများဟုပြောဆိုသူများ ) ။ သန်းခေါင်စာရင်း, ဖော်ပြချက်အတွက်ကိုးကားဆောင်းပါးများ။
↑ David Reich. Who We Are and How We Got Here. Ancient DNA and the New Science of the Human Past (Oxford: Oxford University Press, 2018
↑ Bhopal, R. (September 1998). "White, European, Western, Caucasian, or what? Inappropriate labeling in research on race, ethnicity, and health".
↑ Morning, Ann. "The racial self-identification of South Asians in the United States": 1–19.
↑ The New York Times (12 October 2019): "How Italians became 'White'". Retrieved9July 2020
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လူဖြူ&oldid=698402" မှ ရယူရန်